SOFTWARE MAKA NBUDATA EGWU - ỊHỌRỌ USORO IHE OMUME - 2019
Software maka nbudata egwu
Ntughari bụ ohere iji dochie akwụkwọ ahụ ị chọrọ n'aka onye ọzọ n'ime onwe gị "Ụkọ", ma na-ahapụ njikọ maka isi iyi (onye bipụtara ya). Ọ dabara nke ọma, ị nwere ike ịkekọrịta aha enyi gị na peeji Odnoklassniki dị na ntanetị abụọ.
Banyere repost na Odnoklassniki
Iji mee ka ịghachite dịka iwu niile nke "ezigbo ụdị", ya bụ, ịkekọrịta njikọ na nke mbụ, ọ dịghị mkpa iji dochie njikọ a n'ebe ọ bụla (ọ bụrụ na isi iyi Odnoklassniki, n'ezie). Ugbu a na saịtị ahụ, pịa otu bọtịnụ ma rụọ otu obere arụmọrụ.
Anyị na-edegara Odnoklassniki
N'ụzọ dị mma, a na-eme ya n'ụzọ dị mfe, ntụziaka ya dị ka nke a:
Chọta ebe kachasị amasị gị na ịchọrọ ịgbakwunye onwe gị "Ribbon". Rịba ama bọtịnụ n'okpuru ya, nke dị na aka ekpe. Ị chọrọ bọtịnụ na akara akara.
Nchịkọta nhọrọ ga-apụta ebe ịkwesịrị ịhọrọ nhọrọ nhọrọ. Dịka ọmụmaatụ, iji mee ka ọkọlọtọ mara ọkwa ịkwesịrị iji ihe ahụ "Kekọrịta Ugbu A". Ị nwere ike ịgbakwunye post a na ederede gị n'enweghị ịghachite na ibe gị. I nwekwara ike ịkekọrịta nke a na "Ozi" na / ma ọ bụ na otu ìgwè ị na-enye. N'okwu niile ma e wezụga "Ozi" Onye nwe ụlọ ọrụ ahụ ga-anọrọ anya na ịkekọrịtala ntinye ya.
Ọ bụrụ na ị họrọla ibipụta na ibe gị "Tinye ederede nke gi" ma ọ bụ "Bipụta otu", mgbe ahụ, windo ga-emeghe ka ị banye ozi gị, nke ga-adị n'elu post. Ozugbo e dere ederede, pịa bọtịnụ ahụ. Kwuo. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka a gosipụta repost na ọnọdụ gị, lelee igbe ahụ "Tinye ederede na ọnọdụ".
Na-edegharị akwụkwọ Odnoklassniki mobile
Ọ bụrụ na ị nọ ọdụ na ekwentị ahụ, ịnwere ike ịkekọrịta ozi ọ bụla n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ntuziaka ahụ yiri ụdị PC ahụ:
N'okpuru post ahụ ịchọrọ ịmegharị na mgbidi gị, ịkwesịrị pịa bọtịnụ Kwuo.
A menu mepee na nhọrọ nke omume. Họrọ nhọrọ ịghachite site na iji ihe ntuziaka ndị gara aga mee ihe.
Ọ bụrụ na ị kpebie ịgbakwunye ọkwa a na ederede gị ma pịa bọtịnụ kwesịrị ekwesị, ákwà ngebichi ga-emeghe ebe ịkwesịrị ịbanye okwu gị. Mgbe ihe niile dị njikere, jiri akara ngosi ụgbọelu dị na akụkụ aka nri nke elu ihuenyo. I nwekwara ike ịlele igbe ahụ. "Na Ọnọdụ"Ọ bụrụ na ịchọrọ ka a debe nke a n'ọkwá.
Akwụkwọ mpịakọta onye ọzọ nke Perepost - ọ bụghị ihe siri ike dịka o nwere ike iyi na ị lere ya anya. O kwesịkwara ịtụle na ị nwere ike ịkekọrịta "Ihe edeturu" ọbụna ndị na-abụghị nke gị "Ndị enyi" na ụmụ klas gị.